OZ House | Books Items
30 items found in “Books”
A Case of Good Manners Books
A case of good manner – Book Set လေးက သားသား၊ မီးမီးတို့ အပြုအမှု၊ အပြောအဆို စတဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကို ပျော်ရွှင်စွာ လေ့လာသင်ကြားပေးနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မည့် စာအုပ်ကောင်းလေးတွေပါ….
Murderousmaths to the power of Ten
သင်္ချာဆိုင်ရာ ဝိသေသ လက္ခဏာများကို စုံထောက်ကြီးတယောက်လို စိတ်ဝင်စားဖွယ် လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် စာအုပ်ကောင်းလေးဖြစ်တဲ့… Murderous Maths Collection: 10-Book Set လေး မှာယူလို့ရနေပြီနော်…
Dork Diaries 12 Books Set
Dork Diaries – Global Bestseller & International Bestseller ဆိုပြီး (၆) အုပ်စီ ကိုမှ (၂) မျိုးခွဲထားပြီး တဲ့ စာအုပ်အဓိက Main Character လေးဖြစ်တဲ့ Niki လေးရဲ့ တစ်နေ့တာ အကြောင်း ကို NoteBook လေးအနေနဲ့ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
Horrid Henry Early Reader 25-Book Collection Box Set
Horrid Henry Early Reader 25-Book Collection Box set လေး မှာယူလို့ ရပြီနော်…
Bilbo အတွက် မမေ့နိုင်တဲ့ Story လေးတစ်ခုပါ။ ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမြတ်နိုးတဲ့ Hobbit လေးအတွက် ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနှင့်အတူ မှော်ဆန်ဆန် စွန့်စားခန်းတွေကြောင့် နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ Author J.R.R Tolkien ရဲ့ The Hobbit စာအုပ်လေးကို ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီနော်
International Bestselling Book Set အဖြစ် အသိအမှတ်အပြုခံထားရတဲ့ My Weird School Daze 12-Book Box Set လေး မှာယူလို့ ရနေပြီနော်…
I Can Read Splat the Cat
Primary4to6အထိ အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်တဲ့ Book Set ကောင်းလေးဖြစ်တဲ့… I can read: Beginning 1 Reading Book Set လေး မှာယူလို့ရနေပြီနော်….
Usborne English Readers 14 Books
Cambridge – English Qualifications Level တွေထဲမှ အကောင်းဆုံး စာအုပ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ Usborne English Readers Book လေးတွေ မှာယူလို့ ရနေပြီနော်…
Building Blocks of Mathematics6Books
အခြေခံ သချာၤသဘောတရားများအား ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေ့ကျင့်နိုင်စေရန်အတွက် ထူးဆန်းသော Block တုံး ဇာတ်ကောင်လေးများဖြင့် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်ပါ…
Walker_Nature Story Books
National Ambassador for Children's Literature အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အပြင် Wining awards များစွာရရှိထားတဲ့ Walker_Nature Story Books 8 Book Series လေးတွေ မှာယူလို့ ရနေပြီနော်…
Color My Classics
UK အခြေစိုက် နာမည်ကြီး Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Worthpress မှ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စာအုပ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ Color My Classics စာအုပ်လေးတွေ မှာယူလို့ ရနေပြီနော်…
Author - Joanna Cole ၏ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Series လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Magic School Bus Series လေး Smart Paradise မှာလို့ ရနေပြီနော်….
Honey English Books
English Picture Book ကောင်းကောင်းလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့… အသက်အရွယ် (၂) မှ စတင်ပြီး (၆) နှစ် အရွယ်ထိ ဖတ်ရှုလေ့လာသင့်တဲ့ Honey English Picture Book လေးတွေ ၀ယ်လို့ရ နေပြီနော်
Oxford Phonics World Letter Combinations
English စာအတွက်ဆို အခြေခံကစပြီး သင်ယူလေ့လာချင်တဲ့ သားသား၊ မီးမီးတို့အတွက် Oxford Phonics World မှာလို့ရနေပြီနော်…..
9000 Ks ~ 9500 Ks
8100 Ks ~ 8550 Ks
London အခြေစိုက် Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Usborne Publishing မှ Usborne Phonics Reader – 20 Book Set လေး မှာလို့ရနေပြီနော်…
Author - Trace Moroney ၏ Children’s picture books များစွာထဲမှ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Collection လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “The Things I love About” - Series လေး ရနေပြီနော်….
Smart Mathematicians 2018 Collection's Set
Singapore နိုင်ငံ၏ ပညာရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများထဲမှ အကောင်းဆုံးတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်အသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ Smart Mathematicians – 2018 Collections’ set လေး ပြန်လည်မှာယူနိုင်ပြီနော်…
Diary of A Wimpy Kids Box
New York Time မှ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Top-1 Series လေးဖြစ်တဲ့ Diary ofaWimpy Kid - 15 Book Set လေး ရနေပြီနော်….
Marvel Beginnings 10 Hero Story Books
သားသား၊ မီးမီးတို့ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Marvel 10 Heros Story Books Set လေးလာပြီနော်…
Roald Dahl Collection 15 Books Set
Character Novel for Children အစရှိတဲ့ ဆုများစွာရရှိထားခဲ့တဲ့ Roald Dahl ရဲ့ 15 Book collection – Book Set လေး ရနေပြီနော်….
The Sherlock Holmes Children Collection
Wow… Book collection…တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Sherlock Holmes – Children’s Collection Book Set လေး မှာယူလို့ ရနေပြီနော်…
ကိန်းဂဏန်းတွေ တွက်ရတာပျော်တယ်။ ပုံသေနည်းတွေမှတ်ရတာ ဝါသနာပါတဲ့ သားသား၊ မီးမီးတို့အတွက်…
I Can Read The Biscuit
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စာဖတ်သင်လေး လုပ်ပေးနိုင်ဖို့… ချစ်ရတဲ့ သားသား၊ မီးမီးလေးတို့အတွက် The Biscuit – I can read Collection box set လေး လာပါပြီနော်….
Evan-Moor Skill Sharpeners Books
ဗျည်း အက္ခရာ အလိုက် ပုံပြင်တစ်ခုလို ဖန်တီးပေးထားတဲ့ Evan More စာအုပ် Set လေးက… အရေးအဖတ်၊ အတွက် အချက် သင်ခန်းစာတွေကို အလွယ်ကူဆုံးလေ့လာနိုင်ဖို့ အရိုးရှင်းဆုံး စကားလုံးတွေနှင့် ဖွဲ့စည်းရေးသားပေးထားပါတယ်
35000 Ks ~ 39500 Ks
31500 Ks ~ 35550 Ks
Geronimi Stilton ဆိုတဲ့ ကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေက ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ?
Peek-a Children Books (6 Books)
ကလေးငယ်တွေအတွက် လေ့လာရ လွယ်ကူရိုးရှင်းသော စာလုံးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းရေးသားထားပြီး ရောင်စုံရုပ်လေးများဖြင့် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ Peek-a Books
Summer Brain Quest ( 1-6 Grade )
သားသား၊ မီးမီးတို့ အားလပ်ချိန်တွေအတွက် ပညာရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် သင်ကြားရေး Method စာအုပ်လေးတွေပါ..
Brain Quest Workbooks ( Pre to Grade6)
သားသား၊ မီးမီးတို့ အားလပ်ချိန်တွေအတွက် ပညာရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် သင်ကြားရေး Method, Workbook လေးတွေပါ..
Brain Quest Books ( Age2-13 )
သားသား၊ မီးမီးတို့ အားလပ်ချိန်တွေအတွက် ပညာရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် သင်ကြားရေး Method, Workbook collection လေးတွေပါ
The Feelings Series Collection ( 8 Books)
သားသား၊မီးမီးတို့ စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် ရသစာပေများအတွက် The Feelings Series စာအုပ် Collection
Visitors : 320577